को’रोना परीक्षणपछि एक्ल्याईएकाले कैलाशले अस्पतालबाटै हाम फालेर जीवन त्यागे, रि’पोर्ट भने ने’गेटिभ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/को’रोना परीक्षणपछि एक्ल्याईएकाले कैलाशले अस्पतालबाटै हाम फालेर जीवन त्यागे, रि’पोर्ट भने ने’गेटिभ !
को’रोना परीक्षणपछि एक्ल्याईएकाले कैलाशले अस्पतालबाटै हाम फालेर जीवन त्यागे, रि’पोर्ट भने ने’गेटिभ !
काठमाडौ । पछिल्ला दिनहरुमा को’रोना सं’क्र’मणको आशंका हिनतावोध महसुस गर्दै जीवन त्याग गर्नेहरु बढ्दैछन् । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर यो समस्या देखिएको छ । खास गरी जहाँ को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) लाई एक सामाजिक बहिष्काका रु’पमा लिने गरिन्छ । यस्तै एक दुःखद घट’ना भारत राजस्थानको जयपुरबाट आएको छ । यहाँ एक को’रो’नाको सं’क्र’मण भएको डरका कारण एक व्यक्ति आफ्ना आफन्त सबै प्रियजनहरूलाई उदास बनाउँदै यो संसारबाट विदा भएका छन् । अस्पतालका अनुसार यहाँका ७८ वर्षीय कैलाशले आफ्नो जीवन त्याग गरेका हुन् ।
उनको दिमागमा को’रोनाको डर यति धेरै थियो कि अस्पताल भर्ना भएको १३ घ’ण्टापछि उनी अस्पतालको छानाबाट हाम फाल्न बाध्य भएका थिए । जानकारी अनुसार गम्भीर घाइते अवस्थामा उनलाई तत्काल आइसीयुमा लगियो, जहाँ उनलाई मृ’त्यु घोषित गरियो । वृद्धको मृ’त्युले मानिसहरूलाई को’रोनाको डरबाट मु’क्त हुनुपर्ने ठूलो दबाब महसुस भएको छ ।मृतककी बुहारीले अस्पतालमा व्यवस्था ठीक नभएको आरोप लगाएकी छिन् । उनका अनुसार ससुरा धेरै रिसाए’का थिए । ससुरासँगै उनीहरु पनि जान चाहन्थे, तर रोक्न बाध्यता बनाइयो । उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा कुनै डाक्टर वा स्टाफ राम्रोसँग कुरा गर्दैनन् । हामीलाई सँगै बस्न अनुमति थिएन, भर्ना भईरहेको बेला उहाँ (ससुरा) धेरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो ।’
कैलाश को’रोना सं’क्र’मणको आशंका गरिएका व्यक्ति थिए । तर उनको मृ’त्युपछि आएको रिर्पोटमा उनी को’रोना सं’क्र’मित पाइएनन् । उनी महामारीको डरले नकारा’त्म’कताले घेरिएका थिए । उनलाई अस्पतालमा एक्लै छोडियो । उनको रिपोर्ट बुधवार बिहान नक’रा’त्म’क आयो । यसको अर्थ यदी उनी जिउँदो भएको भए बिहीबार (आज) डिस्चार्ज हुन्थे । छोरा र बुहारीका अनुसार बिरामी वृद्ध अस्पतालको व्यवस्था र स्टाफहरुले देखाएको व्यवहारका कारण दुःखी थिए ।
दुखद खबर ! नेपालमा पहिलोपटक को’रोनाका कारण ‘बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट’ डा’क्टरको मृ’त्यु ! फेरी ह्वात्तै बढ्यो मृ’त्यु हुनेको